Silk Road (2021) | MM Movie Store
လှတျလပျမှုကို လူတိုငျး နှဈသကျတာ သဘာဝပါပဲသငျ့ကို စိတျကွိုကျလှတျလပျခှငျ့ပေးလိုကျမယျသငျ လုပျသမြှကို ဘယျသူကမှလညျး မနှောငျ့ယှကျနိုငျဘူးဆိုရငျသငျဘာလုပျမလဲ ……. ?လုပျခငျြတာတှေ စိတျထဲမှာ တနျးစီပျေါလာမယျထငျပါတယျ
ဘဏျဖောကျပဈလိုကျမယျတို့လုပျခှငျ့မရတာတှေ အကုနျလုပျပဈလိုကျမယျတို့ တှေးမိမယျထငျတယျဟုတျပါတယျ ဒီဇာတျလမျးထဲက ဇာတျလိုကျဟာလညျး သငျ့လို မသမာမှုလုပျဖို့ တှေးလိုကျပါတယျသူဟာ SilkRoad (ပိုးခညျြလမျး) လို့ အမညျရတဲ့ website ( ရှငျးရှငျးပွောရရငျ မှောငျခို ၀ကျဘျဆိုကျ) တဈခုကို တီထှငျလိုကျပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီ ၀ကျဘျဆိုကျဟာ တရားဥပဒနေဲ့ မညီတဲ့ အလုပျမှနျသမြှ အထူးသဖွငျ့ မူးယဈဆေးရောငျးဝယျသူတို့ရဲ့ ကကျြစားရာ နရောဖွဈလာပါတယျဖွဈဆို အဲ့ဒီ ဆိုကျထဲက ဘယျအခကျြအလကျကိုမှ အစိုးရက ခွရောမခံနိုငျလို့ပါပဲ။
ဒီတော့ ဆေးသမားတို့အတှကျ လှတျလပျမှုအကွီးကွီးနဲ့ ရောငျးသူဝယျသူ အကွံတူပွီး လိုတရနတေဲ့ နရောကွီးတဈခုပေါ့။ဒါပမေယျ့ တဈခုပွနျမေးရမှာဒီ လှတျလပျမှုကွီး ကွာရှညျခံပါ့မလား….သငျရော ဘယျလိုထငျပါသလဲ
Dead End of Silk Road ဆိုတဲ့ စာအုပျကို အခွခေံထားပွီးJason Clarke , Nick Robinson ( Love, Simon ) မငျးသားတို့က အဓိက ဦးဆောငျထားပါတယျ။စိတျဝငျစားစရာတှပွေညျ့နှကျနလေို့ လကျမလှတျသငျ့ဘူးထငျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ
လွတ်လပ်မှုကို လူတိုင်း နှစ်သက်တာ သဘာဝပါပဲသင့်ကို စိတ်ကြိုက်လွှတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်သင် လုပ်သမျှကို ဘယ်သူကမှလည်း မနှောင့်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်ဘာလုပ်မလဲ ……. ?လုပ်ချင်တာတွေ စိတ်ထဲမှာ တန်းစီပေါ်လာမယ်ထင်ပါတယ်
ဘဏ်ဖောက်ပစ်လိုက်မယ်တို့လုပ်ခွင့်မရတာတွေ အကုန်လုပ်ပစ်လိုက်မယ်တို့ တွေးမိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်လိုက်ဟာလည်း သင့်လို မသမာမှုလုပ်ဖို့ တွေးလိုက်ပါတယ်သူဟာ SilkRoad (ပိုးချည်လမ်း) လို့ အမည်ရတဲ့ website ( ရှင်းရှင်းပြောရရင် မှောင်ခို ၀က်ဘ်ဆိုက်) တစ်ခုကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဟာ တရားဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ အထူးသဖြင့် မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူတို့ရဲ့ ကျက်စားရာ နေရာဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်ဆို အဲ့ဒီ ဆိုက်ထဲက ဘယ်အချက်အလက်ကိုမှ အစိုးရက ခြေရာမခံနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒီတော့ ဆေးသမားတို့အတွက် လွတ်လပ်မှုအကြီးကြီးနဲ့ ရောင်းသူဝယ်သူ အကြံတူပြီး လိုတရနေတဲ့ နေရာကြီးတစ်ခုပေါ့။ဒါပေမယ့် တစ်ခုပြန်မေးရမှာဒီ လွတ်လပ်မှုကြီး ကြာရှည်ခံပါ့မလား….သင်ရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ
Dead End of Silk Road ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံထားပြီးJason Clarke , Nick Robinson ( Love, Simon ) မင်းသားတို့က အဓိက ဦးဆောင်ထားပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာတွေပြည့်နှက်နေလို့ လက်မလွှတ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ
Wife Watching – Link 1